Booliska Israa’iil: Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu “waa in la maxkamadeeyo” | Biyoguurenews.com
Home Wararka Booliska Israa’iil: Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu “waa in la maxkamadeeyo”
Booliska Israa’iil: Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu “waa in la maxkamadeeyo”
Booliska Israa’iil ayaa sheegay iney maxkamadeyn wajahayaan Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xaaskiisa Sara, ka dib marikii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo laaluush.
Waxaa lagu tuhunsanyahay iney xagga sharciga si khaldan ugu hiilliyeen shirkadda warbaahinta ee Bezeq telecom, iyagoo ka rabay in dhankeeda ay u baahiso warar dhinaca fiican oo kaliya looga eegayo arrimaha ku saabsan Ra’iisul wasaaraha iyo xaaskiisa.
Mr Netanyahu ayaa iska fogeeyay eedeymahaas oo ku jira waxa loo yaqaanno Kiiska 4000.
Xeer ilaaliyaha guud ee Israa’iil ayaa hadda laga dhowrayaa inuu go’aan ka gaaro in kiiskan loo gudbiyo maxkamadda iyo in kale.
Maxay yihiin eedeymihii ugu dambeeyay?
Maanta oo Axad ah, Booliska Israail iyo mas’uuliyiinta laamaha amaanka ayaa sheegay in la helay caddeymo xoog badan oo horseedaya in dacwad la xiriirta musuqmaasuq lagu soo oogo Mr Netanyahu iyo Afadiisa.
Waxaa lagu tuhmay iney faragalin ku sameeyeen go’aanno dhinaca sharciga ah oo loogu eexday shirkadda Bezeq iyo ninka saamiga ugu weyn ku leh ee lagu magacaabo Shaul Elovitch.
Taas baddalkeedana, lamaanahan ayaa sida lagu eedeeyay la siiyay tabin dheeraad ah oo looga eegayo dhanka wanaagsan oo qura, taasoo lagu shaaciyay bog ay internet-ka ku leedahay Shirkadda Bezeq.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay iney heleen caddeymo muujinaya in Mr Elovitch uu bixiyay laaluush.
Benjamen Natenyahu oo ka jawaabayay eedeymahan ugu dambeeyay ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri: “Macluumaadkan waxaa go’aankooda la gaaray lana abuuray ka hor inta aysan baaritaannada billaaban.
“Waan hubaa in saraakiisha ku howlan kiiskan, marka ay wax isla dhiraandhiriyaan ay soo saari doonaan isla arrinta aan sheegayo oo ah: Ineysan waxba jirin, ileen waxba ma jiraane.”
Mr Elovitch ayaan isagu wali wax hadal ah ka soo saarin arrinta.
Maxay ahaayeen labadii kiis ee hore?
Mid ka mid ah wuxuu salka ku hayay eedeyn Mr Netanyahu loogu jeediyay inuu ka dalbaday wargeys maxalli ah inuu u faafiyo wararka taageerada u ah qoyska xukunka haya, taas baddalkeedana uu ka caawin doono sidii uu uga hor mari lahaa shirkadaha warbaahineed ee tartanka kula jira.
Kiiska labaad, Mr Netanyahu waxaa lagu tuhmay inuu helay hadiyado uu qiimahoodu gaarayo ugu yaraan 270,000 oo doolar, kuwaasoo la sheegay inuu ka helay ninka awoodda ku leh shirkadda filimada ee Hollywood-ka ee lagu magacaabo Arnon Milchan iyo taagereyaal kale.
Wargeyska Jerusalem Post ayaa ku soo warramay horraantii sannadkan in hadiyadahaas ay ku jireen khamri iyo sigaar, isla markaana loo bixiyay sidii Mr Milchan looga caawin lahaa inuu helo dal ku galka Mareykanka.
Mr Netanyahu ayaa dhammaan eedeymahaas ku tilmaamay kuwo aan “sal iyo raad toona lahayn”.
Warbaahinta Israa’iil ayaa sheegeysa in ra’iisul wasaaraha 69 jirka ah ay dhowr jeer su’aalo weydiiyeen kooxda baaritaanka ku howlan.
Mr Netanyahu ayaa hogaaminaya isbahaysi burbur qarka u saran, hase ahaatee wuxuu u muuqdaa inuu kalsooni ku qabo in eedeymaha aysan soo dadajin doonin doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyo.
Doorashada xigta ee sharciga ah ayaa ku wakhtiyeysan bisha Nofeembar ee sannadka 2019-ka.
Mr Netanyahu ayaa ku guda jira markiisii labaad ee loo soo doortay xilka ra’iisul
Previous articleDaawo Sawirada :- Amiir Maxamed Bin Salmaan oo lagu bah-dilay shirkii G-20
Next article10 Dal ee ugu musuqmaasuqa Badan Qaarada Africa+Kaalinta Somalia Liiska kaga jirto